အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေကကိုယ်အလေးချိန်တက်လာစေမလား။ - အလေးချိန်
အဓိက > အလေးချိန် > အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကသင့်အားကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသလား - မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများရှိသည်
အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကသင့်အားကိုယ်အလေးချိန်တက်စေသလား - မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများရှိသည်
Nature Metabolism တွင်ယနေ့ထုတ်ဝေသည်။ ဆစ်ဒနီတက္ကသိုလ်မှ Charles Perkins စင်တာမှပါမောက္ခများ၊ ပါမောက္ခ Stephen Simpson နှင့်ဒေါက်တာ Samantha Solon-Biet တို့သည်ကြွက်သားများတည်ဆောက်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးအပ်သော်လည်း၊အမိုင်နိုအက်ဆစ်(BCAAs) သည်သက်တမ်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊
အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ - သူတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဘယ်အရာနည်း။ ပြီးတော့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းအရင်းငါးခုကမင်းတို့ရဲ့ဘ ၀ မှာသူတို့ကိုဘာကြောင့်လိုအပ်ရတာလဲ။ (ဂီတ) အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေ၊ မင်းကြားဖူးလား။ ငါထွက်ရှုပ်ထွေးအနည်းငယ်ထွက်ရှိအပေါငျးတို့သဗီတာမင်နှင့်ဖြည့်စွက်နှင့်အတူငါသိ၏။ ငါ့သူငယ်ချင်းကိုမစိုးရိမ်နဲ့
အထူးပြု allez လမ်းဆိုင်ကယ်
ဒီနေ့ငါတို့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေရဲ့အခြေခံကိုဖြိုချလိုက်ပြီးမင်းဘာကြောင့်အဲဒါတွေကိုသောက်သင့်တာလဲ။ ဟေးလူရမ်းကားငါ Dr. Jordan Wagner ပါ။ COVID ကနေသေနတ်ဒဏ်ရာတွေ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေအားလုံးကိုကုသပေးတဲ့လူနာတင်ကားဆရာ ၀ န်ပါ။
သင်၏မေးခွန်းများနှင့်မင်းကဲ့သို့လူနာများထံမှကျွန်ုပ်ရရှိသောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်ဤဆောင်းပါးတွဲများကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုအဆင်ပြေစွာကြည့်ရှုပါကကျွန်ုပ်ဆောင်းပါးအသစ်များတင်သောအခါအကြောင်းကြားရန် 'Subscribe' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏နေ့စဉ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်စားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်သင့်သည့်အကြောင်းရင်းငါးခုကိုမဖော်ထုတ်မီ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမိုင်နိုအက်ဆစ်များမှာအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်နေသည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
ပထမ ဦး စွာအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ပရိုတင်းပြုလုပ်ရန်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းများသည်ဘဝ၏အခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းတွေဟာအစာကြေတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာဖြစ်တဲ့အခါ၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေကျန်နေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဤအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုစုပ်ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကြီးထွားစေရန်၊ ကြွက်သားများတည်ဆောက်ရန်နှင့်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ပရိုတိန်းများပြုလုပ်ရန်ကူညီသည်။ ၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုအုပ်စုသုံးစုခွဲထားပါသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်အခြေအနေအမိုင်နိုအက်ဆစ်များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်အာရုံစိုက်မည့်အရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေမထုတ်လုပ်နိုင်လို့ပဲ။ အသား၊ ကြက်ဥ၊ ကွီနိုနှင့်ပဲပုပ်စသည့်အစားအစာများဖြစ်သောပြင်ပရင်းမြစ်များမှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
(သို့) အာဟာရဖြည့်စွက်ခြင်း - သောက်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုထပ်မံရောနှောပါကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၉ လုံးရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan နှင့် valine တို့ပါဝင်သည်။ အလို။
ဒါကစကားလုံးတွေအများကြီးပါ။ ဤအရာအားလုံးကိုသင်သိရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ဟာငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုမှာမရှိမဖြစ်အရေးပါပြီးအရေးပါတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။
ဒါပေမယ့်ငါပြောရင်မင်းတို့တောင်မှမသိသေးတဲ့နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးငါးခုရှိတယ်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောင်းလဲစေသောအရာငါးမျိုးကိုသင်နားထောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ နံပါတ်တစ် - စိတ်နှင့်အိပ်ခြင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်ခုဖြစ်သော Trypophan သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ neurotransmitter အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည့်ဓာတုဓာတ်ငွေ့ serotonin ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ Serotonin သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အခြေအနေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နေစိတ်ထား၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အခြားနေ့စဉ်ပျော်ရွှင်မှုအပြုအမူများကဲ့သို့သောအရာများကိုထိန်းချုပ်သည်။ နေ့စဉ်ခံစားရပုံ၊ serotonin သည်စိတ်ကျရောဂါကိုလျှော့ချရန်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုထိန်းညှိရာတွင်အရေးကြီးသည်။
လေ့လာမှုများစွာအရ tryptophan ဖြည့်စွက်ဆေးသည်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ သင်မသိသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၏ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးမှာကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေသည်။ ဟုတ်တယ်၊ အချို့သောလူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်အဆီဆုံးရှုံးမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်ကိုပြသည်။
ရှစ်ပတ်ကြာလေ့လာမှုအရတစ်နေ့လျှင် branched chain အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၁၄ ဂရမ်ဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် whey protein သို့မဟုတ်အားကစားအချိုရည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ နံပါတ် (၃) ကြွက်သားနာကျင်မှုလျော့နည်းခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်တစ်ရက် (သို့) ၂ ရက်အကြာတွင်အနာကြွက်သားများခံစားရခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအသစ်သည်။ ဤတွင်အကြံပြုချက်တစ်ခုအပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ကြွက်သားနာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အချို့ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
ဤအနာကြွက်သားများကိုနှောင့်နှေးသည့်ကြွက်သားနာကျင်မှုဟုသိကြပြီး၎င်းသည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက် ၁၂ မှ ၂၄ နာရီဖွံ့ဖြိုးပြီး ၇၂ နာရီအထိကြာနိုင်သည်။ ဤနှောင့်နှေးနေသောကြွက်သားနာကျင်မှုခံစားချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးကြောင်းသုတေသီများကယုံကြည်ကြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြီးနောက်ကြွက်သားများအက်ကြောင်းများရှိသည်။ သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်တွင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြည့်အချိုရည်အရောအနှောကိုသင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်တွင်ပင်ငန်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်လက်ရှိအသုံးပြုသောအကြိုက်ဆုံးအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြည့်စွက်သည်အမိုင်နိုကုမ္ပဏီမှလုပ်ဆောင်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
ငါဆေးရုံမှာနေ့ချင်းညချင်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ၊ ဒါကြောင့်ငါ Perform ကိုသုံးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်လင်ပြတ်သားမှုနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပေးတယ်။ ငါဒီပုံသေနည်းကိုကြိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအကောင်းဆုံး ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် neurotransmitter ရှေ့ပြေးနမူနာအချိုးအစားရှိပြီး creatinine နဲ့ caffeine ရှိတယ်။
၎င်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ရေဓာတ်ခန်းခြောက်မှုကိုလျော့နည်းစေပြီးပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုနည်းစေပါသည်။ အားလုံးသက်သတ်လွတ်၊ ၎င်းသည် gluten-free နှင့် keto-friendly ဖြစ်သည်။ ငါ link ကိုအောက်ပါဖော်ပြချက်ထဲမှာ paste လုပ်ပေးဒါကြောင့်သင်ကထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပြီး 15% လျှော့စျေးကုဒ် Wagner15 ကိုသုံးနိုင်သည်။
BCAAs သို့မဟုတ် branched chain အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ကြွက်သားပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချရန်ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီ BCAAs ဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ပြန်လည်နာလန်ထူချိန်ကိုမြန်စေသည်။ နံပါတ်လေး - ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုတိုးပွားစေခြင်း Branched chain အမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုလူကြိုက်အများဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
BCAA Leucine သည်ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုကြွက်သားပရိုတိန်းများစုစည်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ BCAAs ၅.၆ ဂရမ်ပါသည့်သောက်သုံးသူသည်ကြွက်သားပရိုတိန်းပေါင်းစပ်မှု ၂၂% ပိုတက်လာခြင်း၊
သို့သော်ဤကြွက်သားပရိုတိန်းပေါင်းစပ်မှုတိုးပွားလာမှုသည် BCAAs နှင့်အတူ Whey protein shake ကိုစားသုံးသည့်အခြားလေ့လာမှုများတွင် ၅၀% လျော့နည်းသည်။ နံပါတ်ငါး - အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်အသည်းရောဂါရှိသူများကိုအကျိုးပြုသည်၊ အသည်းရောဂါ။
Branched chain အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်အသည်း၏အသည်းခြောက်ခြင်းနှင့်အတူသူများ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးနာတာရှည်အခြေအနေကိုအသည်းမကုသနိုင်ပါ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အသည်းအသည်းခြောက်နေသောလူများ၏ ၅၀% သည် Hepatic encephalopathy ဖွံ့ဖြိုးပြီး၎င်းသည်အသည်းသည်သွေးမှအဆိပ်များကိုမဖယ်ရှားနိုင်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ Lactulose ကဲ့သို့သောသကြားအမျိုးအစားအချို့သည် Hepatic encephalopathy အတွက်ကုသမှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်များဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သုတေသီများကအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်အသည်းရောဂါရှိသူလူနာများအနေဖြင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်အာဟာရဖြည့်စွက်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။ အိုကေငါမင်းကိုသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီဆိုတာသိတယ်။ သို့သော်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့အစားအစာအတွက်သူတို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုစားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသည်။ နေ့စဉ်ပရိုတိန်းပါ ၀ င်သောအဟာရအမျိုးမျိုးကိုစားခြင်းသည်လူတို့အတွက်သေချာစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူတို့မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိနေပြီ။
ယနေ့ခေတ်ခေတ်သစ်အစားအသောက်များနှင့်အမျိုးမျိုးသောအစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာရေးရှိသောလူများတွင်ချို့တဲ့ခြင်းသည်ရှားပါးသည်။ သတိပေးချက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင်သည်မည်သည့်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်စာကိုမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်အမြဲတမ်းပြောဆိုသင့်သည်၊ အဆင်ပြေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ပြိုကွဲခြင်း Dr. Wagner ရှိခဲ့ပြီ။
အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြည့်စွက်ဆေးအမျိုးအစားကိုသင်သောက်နေပါသလား။ ငါလုပ်တယ် သို့မဟုတ်သင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များလုံလောက်စွာရရှိသည်ကိုသေချာစေရန်သဘာ ၀ ရင်းမြစ်များကိုမှီခိုနေပါသလော။ ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုမှတ်ချက်ပေးပါ ဒီနေရာမှာ sign up လုပ်ပြီးသင်၏ခေါင်းလောင်းအကြောင်းကြားစာကို enable လုပ်ပါ။
သင်ဤသို့ပြုလုပ်ပြီး 'Like' ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါသင်သည်ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများထပ်မံတွေ့ရှိလိုကြောင်း YouTube အားပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
'မရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်, အစာစားခြင်းအစားထိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပါဝင်သည်, whey ပရိုတိန်းနှင့်အတူ, ကြွက်သားများ၏ပေါင်းစပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်သာ။ ကြီးမြတ်ဖို့ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်ဆုံးရှုံးမှုဆီဥ၊ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးသည်စုစုပေါင်းကိုယ်ခန္ဓာ၏ ၇% ခန့်ဆုံးရှုံးသည်အလေးချိန်။ ဒါပေမယ့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် whey အုပ်စုတစ်သျှူးမှအဆီပို။ ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Branched- ကွင်းဆက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အော့အန်ခြင်း၊ ၀ မ်းလျှောခြင်းနှင့်အစာအိမ်ဖောခြင်းအပါအဝင်အစာအိမ်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရှားပါးကိစ္စများတွင် branched- ကွင်းဆက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်သွေးပေါင်ချိန်မြင့်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊
ကြွက်သားထုထည်တက်ရန်သင်ကြိုးစားနေပါသလား။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ်၌သင်သည်ကြွက်သားထုထည်တက်ရန်ကြိုးစားနေသလော။ ဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးလား။ သင်သေချာသိသည့်အတိုင်းပရိုတင်းဓာတ်လုံလောက်စွာသုံးစွဲခြင်းသည်ကြွက်သားအသစ်တည်ဆောက်ရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကပရိုတိန်းတွေများများစားစားစားတဲ့အခါ၊ မင်းကပရိုတိန်းအမျိုးအစားမှန်ကိုစားနေတာသေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်မယ့်အစားကြွက်သားအသစ်တွေကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုတာဖြစ်တယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုလေ့လာပြီးသင်စားသောပရိုတိန်းသည်သင်၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မဟုတ်ဘဲကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်အသုံးပြုသည်ကိုမည်သို့သေချာစေရမည်ကိုလေ့လာပါ။ ဟိုင်း၊ ဒီလန်းပဲ။ ငယ်ရွယ်သောဗားရှင်းတစ်ခုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကသင်သည်အသက်အရွယ်ကြီးလာသောအခါနာရီကိုမည်သို့ပြန်လှည့်ရမည်ကိုလေ့လာလိုပါကမိမိကိုယ်ကိုကြည့်ရှု။ ခံစားလိုသည်ဆိုလျှင်အောက်ဖော်ပြပါ Subscribe ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဤချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းရန်စဉ်းစားရန်လိုလိမ့်မည်။
'Like' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီဆောင်းပါးမှာဒီဂြိုဟ်ပေါ်ရှိလူတိုင်းစားသုံးရမည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၈ ခုကိုဆွေးနွေးထားသည်။ ၎င်းတို့ကို 'မရှိမဖြစ်' ဖြစ်သောအရာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါမည်။
ပရိုတိန်းဘယ်လိုပြန်လည်အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကိုပြောကြမယ်။ နောက်ဆုံးတော့အမိုင်နိုအက်ဆစ် ၈ ခုလုံးကိုငါရအောင်သေချာအောင်လုပ်ဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်နည်းဗျူဟာကိုသုံးမယ်၊ ပြီးတော့သူတို့ကိုမှန်ကန်တဲ့အချိုးအစားနဲ့ငါရပြီ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအသုံးပြုမှု။ အိုကေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအနေနဲ့ငါတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကြွက်သားထုဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးကြွက်သားအသစ်တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တာကိုသတိထားသင့်တယ်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်အေးခဲ။ ခဲယဉ်းသောအချက်အလက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရတော့သည်။
များများလေလေ၊ လေလေခက်ခဲလေလေဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြွက်သားအသစ်တွေဝတ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒါကငါတို့ကြွက်သားအသစ်မဆောက်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
ကြှနျုပျတို့ လုပျနိုငျပါတယျ။ ဒါကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တည်ဆောက်လို့မရဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နှေးကွေးပြီးတည်ငြိမ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကြွက်သားတွေကျလာတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုကြီးမားတဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးပါ။
ဒါကဆက်ဆက်သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေအတွက်တတ်၏။ သငျသညျကွိုးစားအားထုမထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ကြွက်သား crank တဲ့အခါမှာသူတို့ကျုံ့။ sarcopenia နဲ့ကြွက်သားတွေဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ဖို့သင်တက်ကြွနေဖို့လိုတယ်။ အကယ်၍ သင်ကြွက်သားအသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အားကောင်းတဲ့ခုခံလေ့ကျင့်မှုမျိုးလုပ်သင့်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှကြွက်သားထုလျော့နည်းသွားသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ဟော်မုန်းပမာဏကျဆင်းသွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြွက်သားထုထည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်က testosterone ဟော်မုန်းနှင့်လူသားကြီးထွားမှုဟော်မုန်းနှစ်ခုလုံးလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားအသစ်တည်ဆောက်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်အခါ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးအဆင့်တွင်ရှိရန်ကူညီသည်။
အိုမင်းရင့်ရော်သောအမျိုးသားများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုတိန်းများများစားခြင်းကိုသာမကဘဲပရိုတိန်းများကိုအနှေးနှင့်လည်ပတ်မှုနည်းပါးစေသည့်အစာခြေလုပ်ငန်းစဉ်များလည်းပါ ၀ င်ပါသည်။
ပရိုတင်းသည်ယခုအနည်းငယ်ထူးဆန်းသည်။ မင်းကဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့အဆီနှစ်ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုက catabolic ego tabolism လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာစွမ်းအင်အဖြစ်စားသုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာသူတို့က monosaccharides (သို့မဟုတ် fatty acids) အဖြစ်ပြိုကွဲသွားပြီး mitochondria မှာလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
ထိုအမိုင်နိုအက်ဆစ်များတွင်နိုက်ထရိုဂျင်ပါဝင်မှု မှလွဲ၍ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်ဆင်တူမော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ကိုဂလူးကို့စ်သို့မကူးပြောင်းမီဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည် anabolic ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုဟုခေါ်သောအခြားလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။ ၎င်းသည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ပရိုတင်းများသို့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးကြွက်သားတစ်သျှူးအသစ်ကိုတည်ဆောက်ရန်၊ သင်၏အရေပြားနှင့်အရိုးများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်နှင့်အင်ဇိုင်းနှင့်ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဤဆွေးနွေးမှုအတွက်သက်ရှိသတ္တဝါများအားလုံးနှင့်တူသောအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၂၀ ရှိသည်။ လူသားများ၏ရှုထောင့်မှကြည့်ပါရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဤအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်အုပ်စုသုံးစုခွဲထားသည်။ ပထမ ဦး စွာခန္ဓာကိုယ်မှခြစ်ရာကနေပြုလုပ်နိုင်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များရှိသည်။
၎င်းတို့ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များဟုခေါ်ပြီး၎င်းတို့တွင် ၆ ခုသည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပေါင်းစပ်ထားသောရောဂါများသို့မဟုတ်ဖိစီးမှုများကြောင့်ကန့်သတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုအခြေအနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ၆ ခုလည်းရှိသည်။ သို့သော်အများအားဖြင့်ဆက်နွယ်သောရောဂါများသို့မဟုတ်ဖိစီးမှုများမရှိသည့်အခါ၎င်းအမိုင်နိုအက်ဆစ်များကိုခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များထဲမှ ၈ ခုရှိသည်။
ဤရွေ့ကားအမိုင်နိုအက်ဆစ်များမှာဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုခန္ဓာကိုယ်ကဖန်တီးလို့မရနိုင်တဲ့အပြင်အစာမှတဆင့်ပါ ၀ င်ရမယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ် (၈) ခုလိုအပ်ပြီးပရိုတိန်းအသစ်များတည်ဆောက်ရန်နှင့်၎င်းတို့စားသောအစာမှသာရရှိနိုင်သည်။ ဒီမှာပရိုတိန်းတွေအကြောင်းပါ။
ပရိုတိန်းပြုလုပ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အားလုံးကိုလိုအပ်သည်။ Acid That Me ကျွန်ုပ်တိုတောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ပရိုတိန်းထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပရိုတိန်းကိုလုပ်ဖို့အဲ့ဒီအမိုင်နိုအက်ဆစ်လိုအပ်တယ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်တစ်ခုမပါဘဲသူမလုပ်နိုင်လို့ပဲ။
ကျန်ရှိသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များအားစွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ရှုထောင့်တစ်ခု anabolic အချက်အနေဖြင့်, အမိုင်နိုအက်ဆစ်၏ကျန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားအသစ်တည်ဆောက်ရန်မည်သည့်အရာမျှအသုံးမဝင်ပါ၊ အရေပြားနှင့်အရိုးများကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်အသုံးမ ၀ င်ပါ၊ အင်ဇိုင်းများသို့မဟုတ်ဟော်မုန်းများပြုလုပ်ရာတွင်လည်းအသုံးမဝင်ပါ။
၎င်းကိုဂလူးကို့စ် (glucose) အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သို့မဟုတ်ပါကအဆီအက်ဆစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး adipose တစ်ရှူးအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်သို့လွှဲပြောင်းသည်။
ယခုဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိသက်ရှိအမျိုးမျိုးအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံတစ်ခုရှိသည်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုယူမှတ်ပြီး၎င်းနှင့်ထိုဘဝ၏ပုံစံအတွက်အကောင်းဆုံးအချိုးအစားဖြစ်သည်။ ဘဝပုံစံအမျိုးမျိုးသည်မတူညီသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ဤဘ ၀ ပုံစံ cids '၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါဝင်သည်။
ထို့ကြောင့်သက်ရှိအမျိုးမျိုးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၏တိကျသောပုံစံတစ်ခုရှိသည်။ လူသားများသည်မတူပါ။ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့နွားတွေ၊ ကြက်တွေ၊ ငါးတွေဆီကနေလာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအစာထဲမှာပရိုတိန်းရဖို့အရမ်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီအသားတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့မရှိမဖြစ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ နွားတွေ၊ ကြက်တွေ၊
သို့သော်လူသားများအတွက်မဟုတ်ပါ။ အခြားသက်ရှိများမှလာသည့်ပရိုတိန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စားသောအခါ၎င်းတို့လိုအပ်သောပမာဏနှင့်ကွဲပြားသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကဒါကိုသာစားပြီးငါတို့တတ်နိုင်သမျှကိုပဲသုံးတယ်။ ပရိုတင်းအသစ်တွေဆောက်ဖို့အစားအရာခပ်သိမ်းကိုလောင်စာအဖြစ်သုံးတယ်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့မည်မျှသိရှိနိုင်သနည်း။ ပရိုတိန်းများပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ စွမ်းအင်အတွက်မည်မျှအသုံးပြုသနည်း။ ပရိုတိန်းများတွင်နိုက်ထရိုဂျင်ပါ ၀ င်ပြီးနိုက်ထရိုဂျင်သည်စွမ်းအင်အတွက်ပရိုတိန်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည် မှလွဲ၍ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည့်ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ဖော်ပြခဲ့သည့်အခါသတိရပါ နိုက်ထရိုဂျင်ဘယ်သွားသွားလို့ခင်ဗျားထင်သလဲ။ အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများနည်းတူကျွန်ုပ်တို့၏ဆီးထဲတွင်ထုတ်လွှတ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆီးထဲတွင်နိုက်ထရိုဂျင်ပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်တစ်သျှူးအသစ်ဆောက်လုပ်ရန်ပရိုတိန်းမည်မျှအသုံးပြုသည်၊ စွမ်းအင်အတွက်မည်မျှလောင်ကျွမ်းသည်ကိုတိကျစွာဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ Amino Acid Utilization (AAU) လို့ခေါ်တဲ့နံပါတ်တစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ပရိုတိန်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များအချိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တင်ပြသည်။ ထိုအနံပါတ်များကိုမျိုးအံ့သြစရာရှိပါတယ်။
ပရိုတိန်းအသုံးချမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အပြည့်စုံဆုံးအစားအစာမှာဥများဖြစ်သည်။ သင်၏ AAU သည် ၄၈ ၄၈% သောအမိုင်နိုအက်စစ်များ၏ပရိုတိန်းဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကြွင်းသောအရာသည်ဖြုန်းတီး၏။ အမဲသား၊ ငါးနှင့်ကြက်များတွင် AAU ၃၂ ခုရှိသည်။ Whey protein အမှုန့်သည် ၁၆.၁၆ AAU သာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Whey protein အမှုန့်ရှိအမိုင်နိုအက်ဆစ် ၈၄% သည်ပရိုတင်းဓာတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်အသုံးမပြုသော်လည်းလောင်စာအဖြစ်လောင်ကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်အဆီအဖြစ်သိုလှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အိုကေဒါကြောင့်ဒီမှာသတင်းကောင်းပါပဲ။ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်ကတိုတောင်းသောအနေဖြင့် Master Amino Acid Pattern သို့မဟုတ် MAP ဟုခေါ်သည့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြည့်စွက်စာကိုကျွန်ုပ်လက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်။ MAP တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် (၈) ခုလုံးသည်လူသားများလိုအပ်သောအချိုးအစားတွင်ပါဝင်သည်။
တနည်းအားဖြင့် MAP သည်လူသားများလိုအပ်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့် AAU သည် MAP ရှိအမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၏ ၉၉.၉၉.၉၉% ဖြစ်ပြီးပရိုတိန်းအသစ်များထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
၎င်းသည်သက်သတ်လွတ်အရင်းအမြစ်မှဆင်းသက်လာခြင်းနှင့်ကြိုတင်အစာကြေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်ထိုတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းတွင်တိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်သည်။
သူတို့ကိုငါ ၁၀ နှစ်ကြာအောင်အကြိမ်ကြိမ်ချွတ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ Dr. Minkoff တီထွင်ခဲ့တဲ့ PerfectAmino လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြည့်စွက်ချက်အကြောင်းမကြာသေးခင်ကငါကြားဖူးတယ်။
ကျနော့်အမြင်အရဒါဟာအခြေခံအားဖြင့် MAP ကဲ့သို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ် (၈) လုံးအတူတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းတဲ့ပုံဖော်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။
ထို့အပြင် MAP သည်အလွန်ကောင်းသောမြေဖြူများဖြစ်သောတက်ဘလက်များတွင်ပါရှိသည်။ PerfectAmino ကိုလည်း chalky tablet များအနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်၊ ၎င်းသည်အရသာရှိပြီးအမှုန့်ပုံစံလည်းပါရှိသည်။ ပေါင်မုန့်တစ်လုံးသည် ၅ လုံးနှင့်ညီသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ပရိုတိန်းလှုပ်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့် PerfectAmino နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါ။ 1-2 scoops ဆိုသည်မှာသာမန်လူတစ် ဦး အတွက်လိုအပ်သောပမာဏဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်လေ့ကျင့်နေလျှင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါကအကြံပြုထားသည့်ပမာဏမှာ 4-6 scoops ဖြစ်သည်။ Scoops ၆ ခုသည်အများဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အလေးများများနှင့်ကြွက်သားအသစ်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်ပါကဖြည့်စွက်ခြင်းအပြင် ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအစားအသောက်ပရိုတိန်းပမာဏကိုလိုအပ်သည်။ PerfectAmino မှပရိုတိန်းအားလုံးကိုရယူပြီးကြွက်သားထုထည်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ keto အစားအစာကိုစားနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါမစားဘူး၊ carbs မစားဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် PerfectAmino မှပရိုတင်းအားလုံးကိုရယူပါကကျွန်ုပ်သည်ပရိုတိန်းမစားပါဟုဆိုလိုသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါဟာအဆီကိုသာစားနိုင်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ အရည်အသွေးမြင့်တဲ့အဆီလည်းဖြစ်မယ်၊ ပြီးတော့ mTOR တစ်ခုလုံးရှိတယ်။ ငါ mTOR မှာငါလုပ်ခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးကိုမင်းတွေ့ခဲ့ရင်မင်းဟာငါဘာလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်။ အကြောင်းပြောနေတာ။
ဒီတော့ပရိုတိန်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိသေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒီလမ်းကြောင်းကငါ့ရဲ့တိုးတက်မှုအကြောင်းပါ။ ငါရှာတွေ့သောအခါငါအခြားဆောင်းပါး post နှင့်ငါသည်သင်တို့၏နိဂုံးချုပ်မျှဝေပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ မင်းတစ်ယောက်မှ PerfectAmino ကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်မှာသူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို link တစ်ခုထည့်ထားတယ်။
သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုမှ ၁၀% ရရန်သင်ထည့်နိုင်သောကုဒ်လည်းရှိသည်။ မင်းအစိုင်အခဲပဲ ဒါကဒီဆောင်းပါးအတွက်ပါ။
အကယ်၍ ဤအကြောင်းအရာအမျိုးအစားကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၊ လေးနက်စွာ subscribe ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဤချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ။
ရှုပ်ထွေးသော carb မုန်
Like button ကိုနှိပ်ပါ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်၏လူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေပါ။ ငါ့ကိုမှတ်ချက်ပေးပြီးဆောင်းပါးတွေဘယ်လိုရေးသင့်သလဲ။ ဒါ
ငါဒီမှာမရှိတော့ဘူး နောက်တစ်ခါတွေ့မယ် ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင့်လျော်သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်အဆင့်ဆင့်ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အစွမ်းသတ္တိအဘို့အအရေးကြီးလှသည်။ သူတို့ကကျုံ့ခြင်းနှင့်လူ့ကြွက်သားများကြီးထွားခြင်းအကြားမျှတမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစာနှင့်သင်၏အစားအစာဖြည့်စွက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုနိုက်ထရိုဂျင်ထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။18.03.2021
Theယူရန်အကောင်းဆုံးအချိန်branched- ကွင်းဆက်အမိုင်နိုအက်ဆစ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အားလောင်ကျွမ်းစေပြီးကြွက်သားများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီနှစ် ဦး စလုံးအားသင်၏ shake regimen တွင် ၅-၁၀ ဂရမ်ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းတွင်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အာဟာရဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်မရှိပါအမိုင်နိုအက်ဆစ်အစားအစာဖြည့်စွက်အဖြစ်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအလေ့အကျင့်နိုင်ပါတယ်အန္တရာယ်ရှိသော။ နောက်ဆက်တွဲအမိုင်နိုအက်ဆစ်pharmacological ထက်အာဟာရရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
ဒါပေမယ့်လုပ်နိုင်မင်းထွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲအမိုင်နိုအက်ဆစ်ယူပါ? အဖြေကဟုတ်တယ်။ လူအများစုအတွက်တော့အားနည်းချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးထွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲအမိုင်နိုအက်ဆစ်တာ။၂၉ ။ 2020 ။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အဆီအဖြစ်သိုလှောင်ခြင်းမခံရမီပရိုတိန်းများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသင့်သည်။ ကြွက်သားကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေခြင်းအတွက် branched-chain အမိုင်နိုအက်ဆစ် (BCAA) နှင့်ဖြည့်စွက်ချက်များကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်၊ အဆီနှင့်ပရိုတိန်း - အာဟာရဓာတ်သုံးမျိုး - သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွမ်းအင်ဖြည့်တင်းရန်လောင်စာဖြစ်သည်။
အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်သင်၏အစားအစာအတွက်ကယ်လိုရီကိုအထောက်အကူပြုသည်မှန်သော်လည်း၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးစေမည်မဟုတ်ပါ။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည် carbs နှင့် fats နှင့်ကွဲပြားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကြွက်သားများနှင့်အရေပြားများမှသွေးနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုတည်ဆောက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူတစ်ယောက်အတွက်နေ့စဉ်စားသုံးရန်ကယ်လိုရီ ၂၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် (အမျိုးသမီးတစ် ဦး အတွက်) ကယ်လိုရီ ၂,၄၀၀ ကျော် (သို့မဟုတ်အမျိုးသားတစ် ဦး အတွက်) ၃၅၀၀ ကယ်လိုရီရှိပါကအမိုင်နိုအက်ဆစ်မှပိုလျှံသောကယ်လိုရီများကိုအဆီများအဖြစ်သိုလှောင်ထားပါလိမ့်မည်။